Touring South Korea na njem nleta ụgbọ oloko | Akụkọ Njem
Uringgagharị South Korea n'ụgbọ oloko ndị njem
Mariela Carril | | South Korea, Asia njem
Otu n'ime mba kachasị ọhụrụ ịpụta na map njem nlegharị anya mba ụwa bụ South Korea. Ekwesiri ikwu na ihe nkiri ncha ha emeriela Asia na site na theyntanetị ha na-emeri obi ugbu a na Europe na America. Redirịba ma ezigbo. Ya mere ọtụtụ mmadụ na-achọ ịga na peninshula Korea.
Republic of Korea, nke ahụ bụ aha ziri ezi n'ihi na anyị na-eburu n'uche na e nwekwara Korea Kọmunist, na-anabata ihe karịrị nde mmadụ iri na-eme njem nleta kwa afọ na ya nwere ọtụtụ ihe na-enye na ya Olee ihe enyemaka 100 square kilomita. Ndi bi na 51 nde na ọkara, nke 20% bi na ya Seoul, isi obodo ọ bụkwa mba n’enweghị ihe ịrụ ụka ọ bụla na-agbanwe ngwa ngwa site n’ịkụ ugbo na ọrụ mmepụta ihe. Ma ihe Korea na-enye ndị njem?
1 Gbọ njem ndị njem na South Korea
2 O-ụgbọ okporo ígwè ndị njem
3 Traingbọ njem ndị njem nleta V-Train
4 Zụta tiketi na ụgbọ oloko O-Train na V-Train
Gbọ njem ndị njem na South Korea
Anyị nwere ike ịkọ banyere ihe ịtụnanya dị ugbu a nke Seoul, obodo nke na-enweghị nnukwu anyaụfụ Tokyo, yana ọtụtụ njegharị metụtara akwụkwọ akụkọ ya enwere ike ịme, mana ekwesịrị ikwu na a oké ụzọ na-gburugburu Korea bụ on board ụfọdụ nke ya njem nleta ụgbọ oloko.
Korea nwere ụgbọ oloko njem nleta abụọ mara mma ma atụ aro: el V-Zụọnụ na O-Zụrụ. Njegharị ya ga-eme ka anyị nwee ncheta kachasị mma nke obere obodo Asia. Gbọ oloko abụọ a gaa ndagwurugwu dị na Korea peninshula onye nke ọ bụla na-esikwa n’ógbè dị iche iche gafee.
Ha abuo malitere ịrụ ọrụ na Eprel 2013 na ha bụ nanị njem nleta ọrụ na-enye ndị njem ha a ala na-adaba adaba ụzọ nke mata mara mma ime obodo nke Korea na ógbè ya ndị bụ́ ugwu ugwu. N'ihi na Korea karịrị Seoul na Busan, Ọ bụ mba nke na-ahapụbeghị ọrụ ugbo ya naanị na nke ahụ, karịa skyscrapers ya na mmepe teknụzụ, nwere nke ochie ya na 100% Korea mara mma n'ime.
O-ụgbọ okporo ígwè ndị njem
Ọ bụ ụgbọ okporo ígwè jikọtara mpaghara etiti dị na Korea, nke mejuputara mpaghara ato: Gangwon-do, Chungcheongbuk-do na Gyeongsangbuk-do. Traingbọ oloko (otu), ruo elekere atọ. A haziri ya tụlee otú ọmarịcha oge anọ nke afọ dị na mpaghara a nke obodo nke nwere ugwu ugwu kachasị ukwuu na ogologo oge na South Korea.
O-zụọ o nwere ugboala ano ndi nwere ikike ibu Ndị njem 205. Onye ọ bụla nwere ụdị oche dị iche iche nke nwere ike ịnabata ma ndị di na nwunye ma ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi. Enwekwara oche ndi ozo maka ndi njem njem, na ihe niile ha nwere plọg ịkwụ ụgwọ laptọọpụ, mobiles, mbadamba ma ọ bụ ese foto. N'ezie ọ bụ ụgbọ oloko nke oge a O nwere ime ụlọ ịwụ, ebe ụmụaka na-egwuri egwu na ebe a na-ere nri, ma anyị ga-ahụkwa na n'ime ụgbọ oloko ahụ niile enwere ihuenyo nke na-egosi ihe a na-ahụ site n'elu ụgbọ ala mbụ ahụ ka usoro ahụ na-aga n'ihu n'okporo ụzọ.
Ụgbọ oloko ahụ Cross Seoul, Jecheon, Yeongju, na Cheoram na njem otu ụbọchị, ọ bụ ezie na n'ezie ị nwere ike ịpụ n'ụgbọ okporo ígwè na ọdụ niile: Seoul, Yeongdeungpo, Suwon, Cheonan, Osong, Chungju, Jecheon, Danyang, Punggi, Yeongju, Bonghwa, Chunyang, Buncheon, Yangwon, Seungbu, na Cheoram.
Traingbọ njem ndị njem nleta V-Train
Ọ bụrụ na O na O-Train bụ maka otu na V ebe a bụ maka ndagwurugwu, Ndagwurugwu. Ọ bụ ụgbọ okporo ígwè ndị njem nleta Korea na-abanye n'ime ugwu ugwu nke Gangwon-do na Gyeogsangbuk, na ọtụtụ ndị Korea mara aha ya ọcha tiger ụgbọ okporo n'ihi na n'ụgbọala ya ụfọdụ, a na-ese anụmanụ a na mgbe ọ banyere n'ugwu yiri ka agu na-emekwa otu ahụ.
Ọ bụ ochie ụdị ụgbọ oloko na ọtụtụ n’ime ebe ọ na-aga dị ka a kwụsịtụrụ n’oge wee chetara anyị afọ iri asaa ma ọ bụ 70s. Ma ọ bụghị naanị nke ahụ, Ndị ọrụ nọ n’ụgbọ ahụ yikwa uwe ochie n'ihi ya, obu ezi njem. Ọrụ nke ụgbọ oloko a na-agafe ndagwurugwu Korea na-eme njem ugboro atọ kwa ụbọchị site na ọdụ Buncheon na Gyeongsangbuk-do ruo Cheoram na Ganggwon-do.
Ọ nwere ụgbọ ịnyịnya atọ, ọ pere mpe karịa O-Train na ikike ya Ndị njem 158 abanyela. Mma, na mgbakwunye na ịbụ retro, bụ minimalist na nwere a oghere nche na obere cafeteria. Otu njem dị otu awa na nkeji iri, oge a na-agbakwunye na akụkọ na-atọ ọchị nke ndị ọrụ na-agwa anyị ihe anyị na-ahụ na windo.
Ọ bụrụ na O-Train nwere ọtụtụ ọdụ V-ụgbọ oloko anaghị akwụsị Ọ na - eme obere nkwụsị na Bidong, nkeji ise na iri ọzọ na Yangwon Station, nke na - ejide onwe ya ịbụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè kacha nta na Korea, ma na - eme obere nkwụsị ọzọ na ọdụ Seungbu maka ndị njem ịpụ iji were foto ụfọdụ odida obodo mara mma kwesiri ya. Mgbe ahụ, ọ na-abịarute ọdụ ọdụ.
Zụta tiketi na ụgbọ oloko O-Train na V-Train
Tiketi ahụ nwere ike zụta na ọdụ, mana enwere uzo njem abuo bara uru. Kgbọ njem KR Pass ma ọ bụ Nadeuri Integrated Pass kwere ka ụgbọ oloko abụọ a ma ụgbọ oloko ndị ọzọ dị ka S-Train, DMZ (nke na-agafere mpaghara mmebi a ma ama n'etiti Koreas abụọ), na A-Train .
Ọnụ ego nke O-Train dị n'etiti 27, 300 na 43.400 meriri (n'etiti 20 na 20 euro), na nke V-Train bụ 8.400 na 11 meriri (euro 700 na 70). Njem nke mbụ gbasara njem dị n’agbata elekere atọ, anọ, ise na isii na-amalite n’elekere 8:15 ụtụtụ, ebe nke abụọ nwere ọrụ elekere otu nke ga-ebido n’elekere 10:20 ụtụtụ na nke ọzọ nke awa abụọ na ọkara nke bụ ụtụtụ. .
Have nwere ozi zuru oke na ebe nrụọrụ weebụ ndị njem nlegharị anya Korea, yana ụdị zuru oke na asụsụ Spanish, ọ ka mma na ịlele ya n'ihi na awa na-adị iche kwa ọnwa. Ọbụna nke ka mma, lelee weebụsaịtị KORAIL maka ozi ndị ọzọ ziri ezi na inwe ike ịhazi njem ahụ nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » South Korea » Uringgagharị South Korea n'ụgbọ oloko ndị njem
Ọhịa Na-egbu Onwe Ya na Japan
Ihe niile ị chọrọ ịma ka eme Interrail